Tranonkala manokana - Norvezy sy ny Norwegians - Video firesahana amin'ny firaisana ara-nofo. Velona ny fampielezam-peo sy ny Fiarahana.
Zara raha misy manimba ny fahatakarantsika ny fahazarana
Norvezy dia tsara tarehy eo amin'ny fahasamihafana sy ny fampiononana amin'ny firenenaNorvezy dia tery sy elongated endrika izany na aiza na aiza Ianao, mahafinaritra ny hatsarany ranomasina dia foana ho akaiky Anao.
Ny ankamaroan'ny olona tsy mahalala mpiara-miasa Norvezy amin'ny tendrombohitra sy ny ririnina lohasaha, niriny ny toetrandro, mampieritreritra ny rivotra ary mangatsiaka ny ranomasina.
Norvezy dia mifandray amin'ny maro ny angano momba ny fanaratsiana sy ny mampahatahotra Vikings. Manamarika fa Norvezy dia firenena iray, izay ny iray mandroso indrindra ara-toekarena ny firenena izao tontolo izao: moa ny vola miditra isam-batan'olona dia anisan'ny avo indrindra.
Efa ela ny fomba amam-panao izay refesina sy marin-toerana ny fiainana tao amin'ny firenena Tavaratra no tena mahasarika ho an'ireo mponina any amin'ny firenena hafa. Fomba amam-panao ny firenena mamaritra ny toetra amam-panahy ny zavatra ny olona. Izy ireo dia toy ny mifanohitra koa ny tany ao an-tanindrazany: tena tony sy voatokana teo ivelany sy ny tena tantaram-pitiavana ao am-pony. Impeccably mahalala fomba amin'ny vehivavy, ary amin'ny Ankapobeny amin'ny hafa.
Ireo izay mahalala ny Norwegians, vazivazy aho: raha misy saro-pady Frantsay mba esory ny toe-pihetseham-pontsika, pedantic alemana manampy ny hafanana, zavatra Siberia fiaran-laika ny fahalalam-pomba sy afangaro azy rehetra, fa ny zavatra.
Be herim-po ampy sy efa vonona hanandrana ny vintana ny vehivavy ny nofiny, na inona na inona hipetraka na zom-pirenena. Foana ny mahafantatra izay tokony hatao, ary, na inona na inona ny harena ara-materialy, afaka mahatakatra ny fomba sy izay mandany fotoana miaraka amin'ny malalanao na miaraka amin'ny fianakaviana. Tsy menatra ny tenin ny fitiavana raha toa ka tena nandreraka. Zavatra ny olona tena manana hery sy mafy orina ny lalàm-Panorenana, satria any amin'ny ankamaroan'ny Norwegians manaraka ny ara-pahasalamana ny fomba fiainana, ary ny nanam-potoana tia manao fanatanjahan-tena: tia manao ski ambony, mikorisa, horse mitaingina, ny baolina kitra, hockey sy ny maro hafa. Isaky ny anarana no manahy be loatra momba ny natiora, Hiking, jono ary dia toy izany fialam-boly, ary izany rehetra izany miaraka amin'ny namana sy ny malalany, na dia ny fianakaviana manontolo miaraka. Saika isan-manaja tena zavatra fianakaviana manana trano fialan-tsasatra any an-tendrombohitra na ny morontsiraka ary, mazava ho azy, saika isaky ny fahadimy ny fianakaviana manana ny sambo. Matetika ny Norwegians haingana ho lasa mahaleo tena: maro amin'izy ireo no mbola ao amin'ny dingan'ny fianarana dia efa manomboka ny asa. Avo fahombiazana sy mafy loha toetra amam-panahy izy ireo mba hamela dimy amby roa-polo ho telo-polo taona mba hahazoana fahombiazana lehibe izy ireo. Koa ny dimy amby roapolo taona, ny zavatra afaka manao ny zava-drehetra: ny mahandro (toy ny fitsipika, ny tena ratsy.), sasao, fiara, swaddle ny zaza, milamina ny trano, manjaitra amin'ny bokotra, mandeha miantsena, mba vy pataloha sy ny sisa. Fa na dia eo aza izany, ny zavatra mahazatra dia zara raha vesaran'ny amin'ny fianakaviana any amin'ny tany am-boalohany ny tanora, mahatsiaro ny adidy lehibe izay mitaky ny fanambadiana.
Tsy nanaiky ny tao Norvezy tany am-boalohany ny fanambadiana, fa raha ny lehilahy iray avy any Norvezy nanapa-kevitra ny hanambady, azo antoka fa avy amin'ny fotoana izay ny vadiny ary ny fianakaviany izy dia ho eo ambonin'ny mizana ny soatoavina eo amin'ny toerana voalohany.
Ny fanambadiana any Norvezy dia tena nankasitraka be ary izy io dia nino fa izany dia mampitombo ny toerana misy ny olona izay misy fiantraikany eo, ohatra, ny fampiroboroboana. Tokony mariho fa ny olona avy any Norvezy fianakaviana mahafinaritra ny olona. Ny tena mahaliana dia araka ny fanambadiana, ny olona tsy nisento amin'ny fikambanana, miovaova raharaha ho tsara tarehy ny vehivavy, ary hanohy hizara ny vadiko rehetra ao an-tokantrano ny asa na ny maha-iray manontolo mba handray azy ireo. Noho izany lehilahy izany-Pianakaviana firenena heverina ho afaka suitors, satria izy ireo no vonona hanampy ny manodidina ny trano.
Fitoviana, ny fitovian-jo sy ny bebe kokoa ny fitoviana
Angamba Norvezy no hany firenena any Eoropa aiza ny olana momba ny fitovian'ny lahy sy ny vavy no tapa-kevitra, ary tsy ny alalan ny fampiharana ny fanjakana ny lalàna, sy ny zava-misy fa na dia an-sehatra. Norwegians tsy afaka ny tsy toy izany. Izany manintona ny olona zara raha misy afaka ny hamela ny vehivavy tsy miraharaha. Mendri-kaja, lava, manga maso blondes, ao am-pon'ny izay, afa-tsy, dia mafana"ho an'ny"ny Golfa renirano.
Izy ireo dia nahita fianarana, ny tompon'andraikitra, lehibe, mahira-tsaina ary mendrika, maotina sy tsy rava ny olona, unpretentious eo amin'ny fiainana, indraindray somary tsotra loatra.
Ary mandritra izany fotoana izany, olona avy any Norvezy tena marefo ary noho izany mazava fa mila vehivavy manam-pitiavana sy amin-kitsimpo namana fanohanana.
Zavatra, toy ny fitsipika, ny marina sy ny tsara, raha toa ka misy zavatra nampanantenaina - dia tena atao, nefa tsy mamela heloka ny lainga.
Tsy tokony na dia miezaka mba hamitahana ny zavatra - izy, toy ny olona hafa rehetra, dia mahatsapa ny lainga ary tena sahirana izany.
Izany no Norwegians dia malaza manerana izao tontolo izao noho ny fahatsorana sy ny fahadiovam-po, ary izay fitakiana avy amin'ny olon-kafa.
Hanova ny vadiny any Norvezy dia tsy lamaody sy malaza, dia heverina ho tsy mendrika na dia ny ao amin'ny orinasa ny olona.
Alaivo sary an-tsaina ny lehilahy zavatra mirehareha momba ny mistresses na"nivoaka"avy any ivelany ny vehivavy, azo atao tsotra izao.
Ny fianakaviana, vady, zanaka - masina. Ny Norwegians manao tsara, tena hihaino sy mikarakara ny ray.
Ny zanany, dia tsy hilavo lefona, hampianatra, manampy, manome fanomezam-pahasoavana ary tsy hiala ao alimony, na dia eo aza ny zava-misy fa tsy misy na ahoana na ahoana no mandroso ny fifandraisana miaraka amin'ny reniny.
Ny olona any Norvezy ho refesina kokoa noho ny vehivavy ny toy izany koa ny vintana hihaona zavatra sy hanam-bady izay zavatra ho avy any ivelany ny vehivavy eo foana. Maro Norwegians ankehitriny ireo mikatsaka ny hiditra ao ny fanambadiana amin'ny any ivelany ny vehivavy. Isaky ny zavatra te-hanana tsy namana fotsiny, namana, vadiny, mpiara-miasa, ary ny Vehivavy.
Mamy, hihaino tsara, malemy fanahy, kely tsy afa-manoatra, ny fiahiana ny reny, dia afaka ny hanome azy ny vadiny sy ny zanany ny fampiononana izay ihany-tanana sy ny fanahy ny vehivavy be fitiavana.
Dia tsy mahagaga raha toa ka Norvezy ny tena raisina ho vadiny avy any Norvezy? Hanambady ny zavatra fotsiny. Dia ilaina mba hanome kely ny tena hatsaram-panahy mba hanome mba hahazoana antoka ny tsy fivadihana sy ny fanoloran-tena hanome lanja ny fianakaviana mihoatra noho ny hafa rehetra. Ary avy eo hanao izay rehetra izany. Ary rehefa ny vadiko hitafy ny Latabatra sary ianao, Ianao mahalala - fa tsy ny lamaody, ary ny tena tso-po hetsika ny fanahy.
Maimaim-poana ny Mampiaraka toerana ao Liuzhou Polovinka, maimaim-poana Niaraka
Chat Online tanpa ngadaptar
lahatsary tsara indrindra Mampiaraka ny lahatsary amin'ny chat tsy misy fisoratana anarana raha tsy misy fepetra tranonkala ny lahatsary Mampiaraka Fiarahana tsy misy fisoratana anarana miaraka amin'ny finday ny sary ankizivavy Mampiaraka maimaim-poana ny lahatsary amin'ny chat efitra tsy misy fisoratana anarana Mampiaraka online ny lahatsary amin'ny chat room Mampiaraka ny Fiarahana amin'ny aterineto tsy misy video Mampiaraka